Tomeo Kursi Qurxinta Banaanka - Joornaalka Naqshadeynta
Kursi Qurxinta Banaanka
Kursi Qurxinta Banaanka Intii lagu jiray sannadihii 60-naadkii, nashqadeeyayaasha aragti-yahannada ayaa horumariyey alaabtii ugu horreysay ee bacda laga sameeyo. Awooda naqshadeeyayaasha oo ay weheliso iskudhafka maandooriyaha ayaa u horseeday inay lama huraan noqoto. Naqshadeeyayaasha iyo macaamiisha labadaba way ku sumoobeen. Maanta, waxaan ognahay khataraha deegaanka. Weli, meheradaha maqaayadaha ayaa weli ka buuxa kuraas caag ah. Tani waa sababta oo ah suuqa ayaa bixiya wax kale oo yar. Dunida naqshadeynta ayaa weli ah mid ay ku noolyihiin soo-saareyaasha alaabta birta ah, xitaa mararka qaarkood daabacaadda naqshadaha laga soo bilaabo dabayaaqadii qarnigii 19-aad… Halkan waxaa ku dhashay dhalashada Tomeo: kursi casri ah, nal iyo jaakad furan.
Magaca mashruuca : Tomeo, Magaca naqshadeeyayaasha : Hugo Charlet-berguerand, Magaca macmiilka : HUGO CHARLET DESIGN STUDIO .
Kursi Qurxinta Banaanka Hugo Charlet-berguerand Tomeo